एकान्तमा भेटिएकी नारी न तिम्रो सिकार हो न त तिम्रो जिम्मेवारी ! - अन्नपूर्ण टाइम्स
२४ फाल्गुन २०७७ सोमबार १७:४१
नेपालमा कुल जनसंख्या मध्य महिलाको जनसंख्या ५०.४५ छ । आधाभन्दा पनि बढी रहेको जनसंख्या भएता पनि महिलाहरू दिनहुँ हिंसाको शिकार बनिरहेका छन । संविधानको कमजोर खण्डबाट बल्ल बल्ल हटाइएता पनि व्यवहारमा भन्ने केही सुधार देखिदैन। बारम्बार महिलाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेका छन् ।
४० वर्षभन्दा मुनिका महिलाहरू भिजिट भिसामा वैदेशिक यात्रामा जाँदा परिवार तथा वडाको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको भन्दै खबर बाहिरियो। महिला अधिकारमाथि सिधा हस्तक्षेप भएको भन्दै देशभर व्यापक रुपमा चहलपहल भएपछि ’ खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम संभाव्य मुलुकमा भिजिट भिसामा पहिलो पटक नभएका महिलाहरुका लागि आवश्यक पर्ने गरि सुझाव मात्र गरेको हो, निर्णय भएको हैन ’ भन्दै पछि प्रेस विज्ञप्ति निकालिएको थियो ।
महिलालाई सम्मान अधिकार दिनुपर्छ पनि भन्ने अनि यस्ता विभिन्न प्रस्तावका बारेमा पनि छलफल गर्ने कति सम्मको पाखण्डीपन हो यो ? महिलाको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गर्नु कतिसम्म सहि हो ? न खाडी मुलुक जाने महिला न अरु देश जाने महिलालाई देशले विभेद गर्न पाउँछ ! जहाँसम्म मानव बेचबिखनको कुरा छ, त्यसको लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ छ । फेरि ४० वर्ष भन्दा कम महिलाको मात्र बेचबिखन हुन्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ ? के पुरुषहरु त्यसको सिकार हुदैनन् ? के ४० वर्ष भन्दामाथिका महिलाको तस्करी हुँदैन ?
युनिसेफको अनुसार नेपालमा ४०५ केटीहरुको १८ वर्ष भन्दा अगाडि र ७५ केटीहरुको १५ वर्ष भन्दा अगाडि नै विवाह हुने गरेको छ । हरेक वर्ष नेपालमा गर्भमा छोरी भएकै कारण ५०,००० गर्भपतन गराइएको पाइन्छ । नेपालको कुल साक्षरता ६७.९१५ रहेको छ भने पुरुषको कुल साक्षरता ७८.५९५ र महिलाको कुल साक्षरता ५९.७२५ छ जबकी महिलाको कुल जनसंख्या ५०.४५ छ ।
महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा १३.५ भ्याट लगाइन्छ, लक्जरी कर भनेर! महिनावारी हुनु कुनै पनि महिलाको इच्छा होइन, प्राकृतिक नियम हो । महिला विरुद्धको हिंसा बढेको बढै छ ! अपराधि भइरहन्छ ।
न्यूनीकरण गर्न, नयाँ नियम बनाउन थुप्रै कुराहरु बाँकी नै छन् । पहिला यी सबै समस्याको हल निकाल सरकार, अपराधि समात। तिम्रो असफलताको कारण महिलालाई समाजमा अयोग्य देखाउन कदापि उचित होइन । तिम्रो राजनीति महिलाको शरीरबाट टाढा राख ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि महिलाको आवरण अनि साथी हेरेर विभिन्न प्रश्न सोधिने गरेको थुप्रै घटनाहरु सुनिरहेको हुन्छौं । कुन अधिकारले महिलाको पहिरन, पेसा र व्यवहारले प्रश्न उठाइन्छ ? नम्र व्यवहार गर्नु महिलाको मात्र कर्तव्य हो ? महिला छिटो परिपक्क हुन्छन् बुझ्ने हुन्छन्। सहनसिल हुन्छन्, भन्ने कुरा घर गृहस्थी सम्हाल्ने बेलामा मात्र किन आउँछ, किन देशको जिम्मेवारी पद सम्हाल्ने बेला आउदैन ? अब अझै के पर्खिरहेका छौँ हामी ? अहिले नबोले कहिले बोल्ने ?
“केटी मान्छे हो नजर राखिरहनुपर्छ !“ होइन! नजर हटाइदिनुहोस अरु आफै ठिक हुन्छ । कतै लेखेको देखेको थिए “एकान्तमा भेटिएकी नारी तिम्रो जिम्मेवारी हो, शिकार होइन !“ तर एकान्तमा भेटिएकी नारी न तिम्रो सिकार हो न त तिम्रो जिम्मेवारी ! यति बुझे सबै विभेद बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् ।
अझै कहिलेसम्म पिडित हुने ?
पशुपतिमा सर्वसाधारणलाई दर्शन गर्न रोक
एमाले महाधिवेशन आयोजक समिति बैठक बस्दै, के होला निर्णय ?
नेपालबाट अक्सिजन भारत निर्यात
प्रधानमन्त्री ओली र बामदेवबीच भेट, के- के भयो छलफल ?
दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणबाहिर, लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव